🍒Fastpay Amakhasino - Ukubhaliswa, Indawo Esemthethweni, Ukuqinisekiswa
FastPay Casino >Ukubuyekezwa kwenqubo yokubhaliswa kwekhasino ye-FastPay
Ukubuyekezwa kwenqubo yokubhaliswa kwekhasino ye-FastPay
Imithetho yokubhaliswa kwekhasino eku-inthanethi
Ukunikezwa kokuphromotha kwamakhasimende amasha
Inqubo yokudala i-akhawunti
Ukuqinisekiswa Kobunikazi e-FastPay Casino
Ungakwenza kanjani ukubheja kwakho kokuqala ku-Fastpay?
I-FastPay Casino elayisensiwe yiphrojekthi yamazwe omhlaba eyethulwe ehlobo lika-2018. Inikeza bonke abathanda ukugembula ikhathalogu enkulu yemidlalo yakho konke ukunambitheka - kusuka emidlalweni yetafula yakudala kuya emikhawulweni enqenqemeni. Kulula kakhulu ukuba iklayenti lale khasino - ukubhaliswa ekhasino le-FastPay akuthathi isikhathi esiningi.
Iwebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay isebenza ngaphakathi kohlaka lomthetho wamazwe omhlaba wokugembula, osuselwe kwilayisense egunyeni laseCuracao. Ngalesi sizathu, abantu abaneminyaka engaphezu kwengu-18 kuphela ubudala ngesikhathi sokubhaliswa abangaba iklayenti lekhasino.
Umthetho wesibili obalulekile yi-akhawunti eyodwa. Amakhasino aku-inthanethi ayakwenqabela ukudala ama-akhawunti angaphezu kwelilodwa kumuntu ngamunye. Izakhamizi zamazwe amaningi omhlaba zingaba amakhasimende e-FastPay, ngaphandle kwalawa mazwe alandelayo:
IPortugal, iGibraltar, iFrance nezindawo zayo zaphesheya kwezilwandle;
ILithuania, iSlovakia, iGreat Britain, iWest Indies;
Imidlalo ethile evela kukhathalogi ingahle ingatholakali emazweni athile.
Ngesikhathi senqubo yokubhalisa, umdlali uzimisele ukutadisha yonke imithetho yekhasino eku-inthanethi futhi avumelane nayo. Kunconywa ukuthi ungayinaki le nqubo, ulwazi lwemithetho luzogwema izingxabano eziningi.
Ukwephulwa kwemithetho ye-FastPay kungaholela ekuvinjelweni kwe-akhawunti.
Bonke abasebenzisi ababhalise ne-FastPay bangathembela kubhonasi yokuqala yediphozi. Inani eliphakeme lomholo ngu-100 USD/EUR noma i-865 NOK, i-127 CAD, i-130 AUD, i-138 NZD, i-375 PLN, i-1500 ZAR, i-10650 JPY, i-0.01 BTC, i-1.9 LTC, i-0.256 ETH, i-0.05 BCH, i-44000 DOGE ... Inani lezimali zebhonasi libalwa ngokususelwa ku-100% wosayizi wediphozi.
Ibhonasi iyenziwa isebenze lapho i-akhawunti igcwaliswa futhi, ikhodi yephromo ayidingeki. Njenge-add-on, umdlali uthola ama-100 spins wamahhala kumishini ye-slot. Zifakwa ngokulinganayo - ama-20 spins wamahhala zingakapheli izinsuku ezingama-5 kusukela ngosuku lokufaka
Ukuguqula izimali zebhonasi zibe yimali yangempela, udinga ukubeka ukubheja enanini elizoliphinda ka-50 inani lebhonasi eliqongelelwe.
I-FastPay inebhonasi yesibili yediphozi. Ikhokhiswa ngendlela engu-75% yemali yediphozi. Le bhonasi ingaphansi ngokuphindwe ka-2 kunebhonasi yokuqala.
Ungabhalisela ikhasino le-FastPay kusayithi eliyinhloko, noma esibukweni sayo. Ukubhalisa kuyatholakala kusuka kukhompyutha, i-smartphone kanye nethebulethi
Ukwakha i-akhawunti, chofoza inkinobho"Bhalisa". Itholakala phezulu esizeni, inombala oluhlaza okotshani. Ukuchofoza inkinobho kuzokwenza kusebenze ifomu lokubhalisa ngezinkambu:
iphasiwedi - kunconywa ukuthi ucacise inhlanganisela enzima kakhulu;
uhlobo lwemali - udinga ukukhetha uhlobo olulodwa lwemali olutholakalayo - USDT, USD, EUR, DOG, BCH, LTC, ETH, BTC, ZAR, JPY, PLN, NZD, AUD, NOK, CAD.
Zonke izinkambu ziyadingeka. Umsebenzisi kufanele futhi abheke ibhokisi elithi"Ngiyavumelana nemithetho." Esigabeni sokubhalisa, ungabhalisela uhlu lwamakheli wokuphromotha, noma uzikhiphe ohlwini lwalo. Iphephandaba liqukethe okunikezwayo okuthakazelisayo, izindaba zekhasino. Ungayisebenzisa kabusha ku-akhawunti yakho yangasese.
Ngemuva kokuchofoza inkinobho ethi"Bhalisa", ikhasino izothumela i-imeyili enesixhumanisi sekheli le-imeyili elicacisiwe. Kuyadingeka ukuze kusebenze - umsebenzisi angachofoza kusixhumanisi ngqo encwadini, noma akopishe bese usinamathisela kubha yekheli lesiphequluli. Uma umyalezo ovela ku-FastPay ungekho ku-Inbox yakho kungakapheli imizuzu engama-30, kufanele uvule ifolda yogaxekile, lapho kungenzeka ukuthi umyalezo utholwe ngephutha.
Ukwenza kusebenze i-akhawunti kukuvumela ukuthi ungene ngemvume nge-password ne-imeyili. Ku-akhawunti yakho yomuntu siqu, udinga ukuvula iphrofayli bese ugcwalisa imininingwane engekho mayelana nawe. Yonke imininingwane kufanele ibe nenembile. Ungangeza imali eyengeziwe ye-akhawunti ku-akhawunti yakho - ikhasino alikhawuleli amakhasimende alo emalini eyodwa.
Abasebenzisi abaqinisekisiwe kuphela abangawasebenzisa ngokugcwele wonke amasevisi ekhasino aku-inthanethi. Ukuhoxiswa kwemali kwi-akhawunti yokudlala kuvulwa kuphela ngemuva kokukhonjwa komuntu. I-FastPay ingacela ukuqinisekiswa noma kunini, kepha kungcono ukwenze ngokwakho ngokushesha ngemuva kokubhaliswa
ICasino iqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yomuntu siqu. Ukuqinisekisa, udinga ukuvula ikhasi le-"Akhawunti" ku-akhawunti yakho bese uya esigabeni"Semibhalo". Lapha udinga ukulayisha ukuskena noma isithombe sephasipoti yakho, noma enye idokhumenti engakufakazela ubuwena. Isithombe kufanele sibe sekhwalithi enhle.
Njengesengezo sephasipoti, ungadinga isitatimende sasebhange, i-invoyisi yokukhokha ukuxhumana, njalonjalo. Idokhumenti kufanele ibe nama-initials afana nepasipoti. Isikhathi esiphezulu sokuhlola imibhalo ethunyelwe amahora angama-24. Ikhasino linelungelo lokucela amadokhumenti angeziwe, ividiyo noma ucingo.
Uma unemibuzo mayelana nokuhlonza komuntu siqu, abadlali bangaxhumana nabasekeli. Isebenza ngo-24/7 futhi iyatholakala ngengxoxo ebukhoma nange-imeyili.
Amakhasimende ekhasino aku-inthanethi e-FastPay anelungelo lokususa i-akhawunti yawo yokudlala noma kunini. I-akhawunti ingavalwa ngokuthinta ithimba losekelo.
Uma umdlali engangeni kwi-akhawunti yakhe izinyanga eziyi-6, engafaki ukubheja futhi engafaki imali, i-akhawunti yakhe imisiwe. Ukuqinisa i-akhawunti akuyona ukuvalwa, kungavuselelwa.
Ungabeka ukubheja ekhasino ngokushesha ngemuva kokubhaliswa. Izimali zifakwa ngokushesha. Inani lediphozi elincane ngu-0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Ikhasino ayikhokhisi ikhomishini yokugcwaliswa kabusha, kepha ingasethwa ngohlelo lokukhokha.
Ngemuva kokuthi izimali zifakwe, kusala ukukhetha umdlalo ofanele. I-FastPay inikela ngokudlala imishini yama-slot, imidlalo yetafula, Amakhasino abukhoma nabathengisi ababukhoma. Sekukonke, imidlalo engaphezu kuka-1000 iyatholakala kusayithi. Imishini yeslot ingabuye ihlolwe ngemodi yamahhala. Kunezindawo ezihlukile zokubheja ku-idijithali yemali.
Wonke amaklayenti amasha wamakhasino aku-inthanethi ngokuzenzekelayo aba ngamalungu ohlelo lokuthembeka. Amaphuzu anikezwa ngokusetshenziswa okusebenzayo kwezinsizakalo ze-FastPay. Banquma izinga lomdlali ohlelweni lokwethembeka. Izinga ngalinye linikeza amalungelo alo. Isibonelo, abadlali abanezinga lesibili nangaphezulu lekhasino banikela ngesipho sosuku lokuzalwa.
Amaphuzu atholakele noma amaphuzu esimo angashintshaniswa ngemali yangempela. Ungashintshana kanye ngonyaka - evikini lokugcina likaDisemba.
Ukubhaliswa ku-FastPay kuvulela amathuba amahle kubathandi bemishini yama-slot neminye imidlalo yokugembula. Kulula ukubhalisa esizeni - udinga nje ukugcwalisa ifomu elifushane. Ikhasino licela ukuhlonza ukuqinisekisa ubunikazi - lokhu kuyinqubo ejwayelekile kuwo wonke amakhasino asemthethweni aku-inthanethi